Hisy horaisina ?
Halohalika ny ranombary !
Mananontanona antsika ny korontana sy sakoroka, raha dinihina amin’ny zava-misy amin’izao fotoana.
Miesona ny mpampiesona
Na dia mahasorena aza indraindray ny fivoaran’ny raharaham-pirenena eto Madagasikara manoloana ireo krizy niha mafy teto hatramin’izay sy ny efa mandindona ato ho ato dia ampiononona ny saina na dia kely ihany aza ny endrika mahatsikaiky ao anatiny.
Olom-boafidy sa olom-boavidy !
Lasa resabe indray ny savorovoro tetsy amin’ny lapan’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza omaly.
Kajy mamono vahoaka
Lalina dia lalina ary tena mahafanina ny politika mitranga eto amin’ny firenena ankehitriny. Efa namaritra ny siantifika tamin’ny fotoanandrony fa tafiditra ao anatin’ny tontolo tsy takatra eritreretina na “superstructure” miaraka amin’ny fivavahana izany politika izany.
Iza no sahy velirano ?
5 taona lasa izay dia nisy fanasana nataona tambajotram-pokonolona iray tamina kandida roa hirotsaka ho filoham-pirenena.
Mohaka sy resim-bavy !
Ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny vehivavy omaly izao no malaza. Miezaka mametraka ny tanjony amin’ny fampiroboroboana ny miralenta ny vehivavy, ary fotoan-dehibe tena hanehoana izany io andro iray natokana ho azy ireo.
Ozona sa fandraikiraikena ?
Mahagaga ihany ny fihetsiky ny Malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny. Niakatra avo roa heny ny vidim-bary fa tsy nahataitra azy.
Mivarahontsana ny tena rehefa manambatambatra ny zava-mitranga rehetra tato ho ato.
Na fitsaram-bahoaka manao tohivakana io na lalàna mikasika ny fananantany nohavaozina, indrindra fa ireo fitakiana etsy sy eroa izay tafiditra ao anatiny ny resaka fanoherana ireo Sinoa mpitrandraka harena ankibon’ny tany eto amintsika sy ilay raharaha mikasika renim-pianakaviana voatondraky ny asidra, izay mbola Sinoa ihany koa no ao ambadika. Tsy resahana intsony ireo tolona sendikaly izay toa omaly tsy miova. Ny tiana hiaviana dia ny hoe handova dezaka eto tokoa izany isika satria efa loza mihatra izao no hita fa tsy manambana intsony. Atsy ho atsy dia ho feno vazaha tompontany eto ary ny Malagasy indray no ho lasa vahiny. Tamin’ny lalàna teo aloha dia tsy azo amidy ny tanindrazana. Amin’izao fotoana, nanovanana hoe azon’ireo vahiny atao ny mifanaraka amin’ny fitondrana raha tian’izy ireo ny hividy tany eto. Hisy horaisina intsony ve ho an’ny taranaka faramandimby raha tsy haato izao fivavahana amin’ny vahiny izao e ?